Varume Apparel, Padded Jacket, Varume Mapfekero - Hengqianxiang
Matimu uye masevhisi
Nyaradzo, Kuita Kwakanyanya, Ruzivo
Vakadzi Vanodziya Vechidiki Varume Mapfekero Akasarudzika Pfeka Padde ...
Shell 100% polyester Lining 100% polyester Kuzadza 90% dhadha pasi, 10% minhenga Kukura Chero saizi iripo Ruvara Chero chero ruvara ruripo. Zvimwe Chaizvoizvo raccoon fur fur Chigadzirwa sumo. Musiyano wemaraini lining dhizaini unoita kuti bhachi rive diki. Huru hombe yeraccoon chengetedza ut yemhepo. Chigadzirwa chinosanganisira Super inodziya, yakanaka vhezheni.
Factory Wholesale Men Apparel Fashional Clothes ...
Shell 100% polyester Lining 100% polyester Kuzadza 90% dhadha pasi, 10% minhenga Kukura Chero saizi inowanikwa Ruvara Chero ruvara ruripo Chigadzirwa sosi. iyo yakakurumbira gwayana dhizaini dhizaini. Chigadzirwa chinoratidza kurema uremu, hwomutambarakede.
Factory Mugadziri Men Apparel Okurerutsa Wear Sh ...
Shell 98% donje, 2% polyester Lining 100% polyester, Kuteedzera makwayana emvere Kuzadza 100% polyester Saizi Chero saizi inowanikwa Ruvara Chero ruvara ruripo Chigadzirwa sosi Yakanaka mhando yekotoni jira inogadzira bhachi repamusoro-giredhi. Bhachi rinouya rakachekwa zvine mutsindo zvinokodzera muviri wako zvakakwana, uye rinoita kuti utaridzike kunge wakasarudzika uye wakanaka. 50% yemakushe inoita kuti unzwe kudziya munguva yechando kana mumatsutso. Chigadzirwa chinogadzira Stylish, inodziya, isina mhepo, Yakakosha mwenje uremu uye inodziya zvinhu.
Fekitori Mugadziri Akarongeka Mapfupi Woolen Varume Jasi
Shell 100% polyester Lining 100% polyester Kuzadza 100% polyester Kukura Chero saizi inowanikwa Ruvara Chero ruvara ruripo Chigadzirwa sosi Yakanaka mhando machira machira anoita bhachi repamusoro-giredhi. Bhachi rinouya rakachekwa zvine mutsindo zvinokodzera muviri wako zvakakwana, uye rinoita kuti utaridzike kunge wakasarudzika uye wakanaka. 50% yemakushe inoita kuti unzwe kudziya munguva yechando kana mumatsutso. Chigadzirwa chinosanganisira Yakanaka vhezheni, isina mhepo, inodziya.
Varume Mapfekero Akasarudzika Pfeka Yakareba Windbreaker Jacket
Shell 100% donje Lining 100% polyester Saizi Chero saizi inowanikwa Ruvara Chero ruvara ruripo Chigadzirwa sosi Dhizaini -mazamu dhizaini, Belt kushongedzwa. Yakatetepa uye yakareba vhezheni inoita kuti utaridzike nenyasha. Chigadzirwa chinosanganisira Yakanaka vhezheni, isina mhepo, inodziya.
100% Polyester Windproof Custom Varume Pfupi Bombe ...
Shell 100% polyamide Lining 100% polyester Saizi Chero saizi inowanikwa Ruvara Chero ruvara rwuripo Chigadzirwa sumo Ichi chipfeko chinouya nekutema nhema, uye inoratidza hunyanzvi uye chimiro chemazuva ano. Homwe yakamonerwa paruoko yakaiswa zvakasarudzika, uye inowedzera funk kune zvimwe zvipfeko zvakapusa. Yakagadzirwa yemhando yepamusoro isina mvura uye isina mhepo isina shangu.Iyo yakanaka kune yekunze uye yakasarudzika kupfeka. Chigadzirwa chinogadzira Isina mvura uye isina mhepo, inokurumidza kuoma.
Hot Kutengeswa Nguva yechando Vakadzi Apparel Fashional Pasi C ...
Shell 100% polyamide Lining 100% polyester Kuzadza 90% dhadha pasi, 10% minhenga Kukura Chero saizi iripo Ruvara Chero ruvara ruripo Vamwe Chigadzirwa chinopenya Pingi inopenya Pasi Yejacket yakagadzirirwa zvakakwana kurwisa mwaka wakakomba usingareme kune vanopfeka. Iyo bhachi inosvinwa neyakaomeswa tekinoroji ine yakakwana optimum kumvura uye yakanyanya kuramba kurashika kwemuviri kupisa. Izvo zvinhu zvejekete zvinonyatso kutwasuka uye kushinga pamberi pe nyore da ...
Sport Outwear bhachi Wholesale customized wome ...
Chigadzirwa sumo Uyu mutambo bhachi wakasununguka kwazvo kwekunze.Ijira harina mvura uye rinokurumidza kuoma. Iyo zipi zvakare haina mvura.Hapana kana dambudziko nekunaya kwemvura panze.Micheka inopora inorega ziya kuyerera nekukasira.Convenient chest chest. Zvimiro zvechigadzirwa 1. Zvinogara uye zvakagadzikana. 2. Yakanyatso kutambanudzwa. 3. Yakakosha mwenje uremu uye inodziya zvinhu. 4, Izvo zvakanaka kune zvekunze zviitiko mukati megore uye mwaka wematsutso. Kana iwe uchida mavara, saka jekete iri rakanakira iwe. Iyo j ...
Yemakwikwi fekitori mutengo. Isu tinodzora chikamu chega chega chemutengo kuti tikupe iwe wakanyanya mutengo.
Tinogona kuburitsa madhizaini madiki uye akavhenganiswa maodha.
Mushure mekusimbisa muyenzaniso uye odha, tinogona kununura nhumbi mumazuva makumi matatu.
In-udzamu customization sevhisi
Tinogona kukubatsira iwe kukudziridza ako masitaera matsva maererano nepfungwa yako kana hunyanzvi.
Beijing Hengqianxiang International Kutengesa Co., Ltd.
Kutendeseka, mutoro, kuhwina
Chii chichava mamiriro emachira uye garme ...
China yekutengesa machira neyekupfeka zvaive zvisina kujairika muhafu yekutanga yegore rino nekuda kwekupararira kwepasirese kwe COVID-19. Kupinda muna Chivabvu naJune, imwe data yatora. Mamiriro ezvinhu akazara mu ...
Ona zvimwe >>
Vashandi vemanheru pamberi pe 2020 Spring Mutambo, s ...
Pakupera kwa2019, isu tichapfupikisa basa regore rapfuura, tichisimbisa zvakanyanya matambudziko ari pabasa, uye rega munhu wese arangarire kuita basa riri nani muNew Year.Tine vhezheni inogadzira t ...
Zvemashiripiti Ratidza Muna Kukadzi 2020
Tichaenda kune MAGIC SHOW MUNA Kukadzi 2020, Ramba wakashongedzerwa nenhau dzekupedzisira.
Hunhu Kutanga, Mutengi Chikuru
Kero:RM4A22, Kuvaka B, Ritan International Trade Center, Chaoyang Dunhu, Beijing, China 100020